TPS Yemen | Maxaan samayn karaa haddii aan TPS for Yemen waxaa dhacayo? | USAHello
TPS Yemen - waxa aad samayn karto haddii aad TPS dhacayo?
Halkan waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan TPS dadka ka soo Yemen.
TPS Yemen – marka ma aan TPS dhacayo?
on July 5, 2018, Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay kordhin doonto TPS for Yemen ilaa March 3, 2020.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kordhinta this for TPS Yemen u muuqdaan in a Register Federaalka ogaysiis.
Waxaad u baahan doontaa in dib-u-diiwaan. Si ay u ilaaliyaan xaaladda TPS aad, waa in aad dib-u-diiwaan inta lagu jiro mudada dib-u-diiwaangelinta 60-maalin ah in waddaa ka August 14, 2018, iyada oo loo marayo October 15, 2018. Si aad u diiwaangeliso ama dib-u-diiwaan TPS waa in aad soo gudbiso Foomka I-821, Codsiga Aqoonsi Badbaadin Ku meel. Raac tallaabooyinka hoos “Maxaa la fayl” on this page. Markaasuu u soo dir mid ka mid ah cinwaanada hoos “Xaggee gudbiso” ku saabsan Yemen bogga.
waraaqaha oggolaansho Employment (EAD) si toos ah u kordhiyay doonaa ka September 3, 2018, si March 2, 2019. Haddii USCIS-mariyay codsigaaga dib-u-diiwaangelinta TPS, waxaad la soo saari doonaa EAD cusub taariikhda uu dhacayo of March ee 3, 2020. Tag this page USCIS in uu akhriyo sida aad u heli waraaqaha cusub oggolaansho shaqo.
Maxaa dhacaya marka TPS Yemen dhacayo?
Sida loola xidhiidho safaarada Yemen ee USA
Cinwaanka safaarada waa 2319 Wyoming Ave NW, Washington, DC 20008.
lambarka taleefanka waa: (202) 965–4760.